Selfie များအတွက် Monopod - ဘယ်လိုသုံးစွဲဖို့?
ဓါတ်ပုံ၏အရည်အသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, ဖြတ်သွား၏လွတ်လပ်သောဖြစ်လာရန် monopod, ဒါမှမဟုတ်ကပ်ဖို့လူချစ်စနိုးဦးမည် selfie ။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်များအတွက်ကိရိယာ၏လူကြိုက်များနေသော်လည်း selfie များအတွက် monopod သုံးစွဲဖို့ဘယ်လောက်၏အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အမျိုးအစားများရဲ့ features တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား - တစ်ရိုးရှင်းကြိုးသို့မဟုတ် Bluetooth အပေါ်အခြေခံပါတယ်။
selfie များအတွက်ရိုးရှင်းသော monopod အသုံးပြုနည်းဘယ်လိုနေသလဲ?
သမားရိုးကျ monopod သုံးပြီးအကြီးဓါတ်ပုံကိုဖန်တီးရန်သာ bracket က slot က၌သင်တို့၏ကိရိယာ (ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကို) ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီနောကျစမတ်ဖုန်းတစ်ဦးရှေ့ကင်မရာတို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲနှောင့်နှေးမှတ်တမ်းတင် mode ကို (ဥပမာ, 10-15 စက္ကန့်) ဖြစ်ပါတယ်။ Selfie အတွက်တယ်လီဖုန်းကွာသည်မိမိလက်ကိုအပေါ်ကိုပြန်ဆင်းကပ်။ ကင်မရာကို screen ပေါ်မှာကလစ်နှိပ်ခြင်းပြီးနောက်သင်၏ဓါတ်ပုံများဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဝါယာကြိုးနှင့်အတူ selfie များအတွက် monopod သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
တစ်ကေဘယ်လ်ကြိုးမှတဆင့်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ဝါယာကြိုးနှင့်အတူအထက်ပါ-ဖော်ပြထား Selfie ချောင်းကို device ကိုမတူဘဲ။ tripod cable ကိုဒါခေါ်ဂျက်-jack ကိုစမတ်ဖုန်းသို့ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ ဒါဟာချိတ်ဆက်နားကြပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ jack ကိုမှာခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တစ်ဦးခလုတ်ကိုအတူ monopod သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုလျှင်, ချက်ချင်းအန်းဒရွိုက်စနစ်၏များစွာသော monopod ချိတ်ဆက်ပြီးနောက်နောက်ထပ် software ကို install လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးထွက်ညွှန်ပြကျိုးနပ်သည်။ ဆမ် monopod လက်ကိုင်ပေါ်ပါဝါခလုတ်ကိုနှင့်အတူပါဝင်သည်။ device ကိုတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်စေရန်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများအတွက်အစီအစဉ်ကို "ကင်မရာ" ကိုသွားပါ။ (« zoom » function ကိုကာလ၌ရှိသကဲ့သို့) ကိုပုံရိပ်တိုးမြှင့သို့မဟုတ်လျှော့ချရန်အလို့ငှာခုနှစ်, အသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်များကိုအသုံးပြုပါ။
ဘလူးတုသ် selfie ချောင်းကို, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး monopod သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ရောင်းချခြင်းတွင်အကြီးဓါတ်ပုံကိုဖန်တီးရန် monopods ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ကြိုးမဲ့။ ဤကိစ္စတွင်အတွက် connection တစ်ခုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောမူအရလည်းမရှိ:
ပထမဦးစွာ Selfie ချောင်းကိုပေါ်တွင် Bluetooth လှည့်ခြင်း, ညွှန်ပြချက်ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းအပြာတက်ထွန်း။
ထိုအခါဒီ feature ကသင့်ရဲ့ smartphone အပေါ် enabled ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ရှာရန်", ပြီးတော့တစ်ဦး monopod ၏သတ်မှတ်ရေးကိုရှာဖွေရပေမည်။ ဒါဟာမကြာခဏညွှန်ကြားချက်များတွင်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ«ကင်မရာ»လျှောက်လွှာကိုသွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ကင်မရာလက်ကိုင် selfie ချောင်းကိုအပေါ်ခလုတ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့စမတ်ဖုန်းလမ်းကြောင်းအချို့ကိုမော်ဒယ်များဘို့မသင့်တော်သည်။ monopod ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုများအတွက် app store ကို (App Store မှာသို့မဟုတ် Market က Play) အတွက်အကြံပြု applications များတဦးကို download လုပ်ပါရန်ရှိသည်။ ဒါဟာ Android နှင့် Selfie ဒီနည်းမှန်လမ်းမှန်မဖြစ်နိုင်ပါရှိရာကိစ္စများတွင်ကပ်ပေါင်းစပ်ဖို့ကူညီပေးသည်။
အားပြန်သွင်းနိုင် penlight ဘက်ထရီ
လက်ပ်တော့အပေါ် Wi-Fi ကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မီးသင်္ဘော function ကိုအတူမီးဖို
တစ်ဦး Code ကိုဘီလ်ကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌ရှိသလော
အရွယ်ရောက်သူမှာနံနက်ယံ၌ချောင်းဆိုး - အကြောင်းရင်းများ
Channing Tatum နှင့် Jenna Dewan ကွာရှင်း
မိသားစုစျေးဝယ်: Irina Shayk နှင့် Bradley Cooper နှင့်သူမ၏သမီး Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့စတိုးဆိုင်သို့သှားကွ၏
စိတ်ပညာရှင် - တစ်ဦးကိုခစျြတစျဦး၏အသေခံခြင်းရှင်သန်ဖို့ကိုဘယ်လို
လိင်ဘဝမျိုးစုံ 10 နည်းလမ်းများ
ကမ်ဘာပျေါတှငျ 27 cutest ခွေးပေါက်စ
ကရင် McDougal Donald Trump နဲ့ဆက်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောသည်ယခင် Playboy မော်ဒယ်လ်နဲ့မင်းသမီး